Volusion: All-in-One Ecommerce Weebụsaịtị Nrụpụta Ihe | Martech Zone
Nke Volusion ikpo okwu niile na - eme ka ọ dị mfe ịhazi ụlọ ahịa gị na nkeji. Usoro ha na-eme ka ọ dị mfe iji rụọ ụlọ ahịa gị, ịnakwere ịkwụ ụgwọ kaadị akwụmụgwọ, ịchekwa ihe ma ọ bụ imelite imepụta saịtị gị. Egwuregwu ecommerce ha na-enye ndị na-ere ahịa ikike ibili ma na-arụ ọrụ na njiri mara ọrụ yana ọmarịcha njirimara.
Volusion's Ecommerce Builder Atụmatụ:
Onye isi ụlọ ahịa - Hazie anya na mmetụta nke saịtị gị site na iji isiokwu ndị ọkachamara na editọ saịtị anyị dị ike. Mezie ibe gị na ịdọrọ na dobe mgbochi ọdịnaya maka mgbasa ozi mmekọrịta, veranda oyiyi, vidiyo na ndị ọzọ.
Gburugburu - nhọrọ nke isiokwu ndị ọkachamara na-arụ ọrụ na ecommerce. Isi okwu ọ bụla mara mma, na-azaghachi nke ọma, ezubere iji ree karịa.
Akwụkwọ peeji - Dọrọ na dobe ngwaahịa na ụlọ ahịa gị, hazie nhọrọ gị na nhọrọ nhọrọ peeji na-adịghị agwụ agwụ ma jiri ọtụtụ ihe karịa na ikpo okwu Volusion. Nye ọnụahịa dị iche iche maka nhọrọ ngwaahịa ọdịnala ma mepụta mwepu ego na kupọns omenala.
Mentkwụ Processgwọ nhazi Integration - A bịa n’ịkwụ ụgwọ, anyị na-eme ya ọsịsọ na mfe. Na njikọta dịka Stripe, PayPal na Apple Pay, ị nwere ike ịtọ ụlọ ahịa gị ngwa ngwa iji nweta iwu ndị ahụ (na ịkwụ ụgwọ!)
Ngwaọrụ Platform - Ngwaahịa ngwaahịa, njikwa ndị ahịa, njikwa iwu, ibe, nyocha na ngwa ọdịnala jikọtara ọnụ.
Marketing - Volusion nwere SEO nwere njirimara nke ga - enyere gị aka iwuli saịtị gị maka injin nchọ na ndị ọrụ. Jikọọ na ndị ahịa gị na mgbasa ozi mmekọrịta ma kpọsaa site na mgbasa ozi PPC na ụlọ ahịa ịzụ ahịa.
Ndepụta Ngwaahịa - storelọ ahịa gị n'ịntanetị chọrọ usoro njikwa ngwa ahịa nke na-achọpụta ngwaahịa gị na ntanetị na ntanetị. Okwesiri ikwe ka ịhazi ngwaahịa site na edemede na njirimara ndị ị nwere ike ijikwa dịka agba na nha. Nke a na - eme ka ọ dịrị ndị ahịa gị mfe ịchọta kpọmkwem ihe ndị ha na - achọ na websaịtị gị.
Security - Mee ka ntụkwasị obi site na itinye iwu nzuzo siri ike ma tinye ego na asambodo SSL na nchedo aghụghọ maka ebe nrụọrụ weebụ ecommerce gị iji kpuchido data ndị ahịa nkeonwe.
Mmekọrịta - Jikọọ na ngwa ndị ọzọ - gụnyere nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta, ntanetị ọrụ na nkwado, yana nyiwe azụmaahịa. Mmekọrịta gụnyere hover, straipu, PayPal, Kọntaktị Kpọtụrụ, Amazon, Shippo, Pinterest, Facebook, Intercom, Privy, Mailchimp, Live Chat, Google Analytics na ndị ọzọ.
Services - Volusion na - enye kwa ego onu ahia imebe, ichikota na ichota ulo ahia na ahia gi. Ha na-enyekwa ọkachamara ọkachamara, ahịa na ọrụ nyocha maka mkpa dị elu.
Tags: amazonKpọtụrụ na mgbe niileọdịnaya managementnjikwa ndị ahịaecommercenchịkọta ecommerceecommerce njikọahia ecommerceecommerce n'elu ikpo okwungwakọta azụmahịa ecommerceFacebooknchedo wayoezumikeájáNdepụta Ngwaahịankata ndụmailchimponline ụlọ ahịaonye na-ewu ụlọ ahịa n'ịntanetịnjikwa njikwaugwo nhaziPaypalPinterestnzuzoụdị ngwaahịaibe ibeShippochekwaa gburugburustraipuvolluji